दाङको पाँच वडामध्ये ३ स्थानमा माओवादी विजयी
विहीवार बेलुकासम्म सार्वजनिक तीन वडामा माओवादी केन्द्र र १/१ वटा वडामा नेपाली काँग्रेस र एमाले विजयी भएका छन्। पछिल्लो समय शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. १ मा माओवादी केन्द्रका जंगबहादुर पुनको प्यानल नै विजयी भएको छ। कुल मतदाता १ हजार ७ सय ३८ रहेको यस वडामा १ हजार ३ सय ५२ मत खसेको थियो।
यसअघि राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ९ मा पुरै प्यानल र गढुवा ८ मा एउटा सदस्य वाहेक सबै पदहरु माओवादी केन्द्रले जितेको हो।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ९ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रिमबहादुर सुनारी मगर २०० मत प्राप्त गरि निवाचित भएका छन्। यहाँ माओवादी प्यानलसहित विजयी भएको छ। मुख्य प्रतिपर्धी नेपाली काँग्रेस थियो। महिला सदस्यमा कुवाँरी देवी कार्की २०८, दलित महिला सदस्य देउकला कामी २०५ र सदस्यहरुमा अलि महम्मद मियाँ २०५, दधिबहादुर बराल २०२ विजयी भएका छन्। यस वडामा कुल मतदाता ५८३ रहेकोमा ४५७ मत खसेको थियो।
त्यस्तै दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ एक सदस्य वाहेक अन्य सबैपद माओवादीले जितेको माओवादीले जितेको छ। गढवा ८ को अध्यक्षमा सद्धाम सिद्दीकी विजयी भएका हुन। गढवा ८ को अध्यक्षमा माओवादीका २३ वर्षीय सद्धाम सिद्दीकी १०७ मत सहित विजयी भएका छन्।
त्यस्तै गढवा ८ कै सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका अब्दल हमिदा खाँ ८९ मत प्राप्त गरि बिजयी भएका छन्। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र नारायणसिंह थापाले ९८ , महिला सदस्यमा मनमाया गुरुङ १०१ र दलित महिला सदस्यमा विमला विक १०४ विजयी भएका छन्। गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ साविक कोइलाबास गाविसमा पर्दछ। भारतसँग सीमा जोडिएको सो वडामा कुल मतदाता ४९८ रहेकोमा ३४७ मत खसेको थियो।
बंगलाचुली–१ मा काग्रेसको जित
बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. १ मा कांग्रेसका पदम केसीको प्यानल नै विजयी भएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका सन्तराम भण्डारीलाई एक सय मत अन्तरले पराजित गरी केसी विजयी भएका हुन। विजयी केसीले ३ सय ५४ मत प्राप्त गरेका छन् भने भण्डारीले २ सय ५४ मत प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै महिला सदस्यमा देवा पौडेल, दलित महिला सदस्यमा राधिका नेपाली र सदस्यहरुमा चन्द्रकुमार घर्ती र माधिका कँवर विजयी भएका छन्। कुल मतदाता १ हजार ३ सय ६९ रहेको यस वडामा ९ सय ४३ मत खसेको थियो।
दंगीशरण १ मा एमाले बिजयी
दाङको दंगिशरण गाउँपालिका वडा नम्वर १ मा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ। वडाध्यक्षमा श्रीप्रसाद चौधरीले ३ सय ९७ मत ल्याई विजयी भएका हुन। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केनद्रका वडा अध्यक्षको २ सय ७८, काँग्रेसको २ सय ७२ र राप्रपाको ४० मत आएको थियो। त्यस्तै महिला सदस्यमा नन्दाकुमारी वस्नेत , दलित महिला सदस्य अमृता विक, जानकी चौधरी, उमेश चौधरी विजयी भएका हुन।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १५, २०७४ ०८:१२:१९